China KN95 GB2626-2006,GB2626-2019 (With Exhalation Valve) fekitari nevagadziri | Gubang
1. Vhura mask / respirator nemaoko maviri.
2. Kama mask pamhino nemuromo nemhino pazambuko remhuno.
3. Isa chinovhara nzeve kumativi ose nzeve.
4. Isa zvigunwe kubva pamaoko maviri kumusoro kwemhino. Svetera zvigunwe pasi mativi maviri e
iyo mhino yekuumba nzvimbo yemhino kune chimiro chevashandisi mhino. Gadzirisa loop nzeve kana zvichidikanwa
iva nechokwadi chekuti mask yakavharwa zvakachengeteka.
5. Chisimbiso cheki
· Isa maoko ese pamusoro pemask, uye tora kufema nekukurumidza kuti utarise kana iyo mask inosunga zvakasimba kumeso.
· Isa maoko ese ari maviri zvachose pamusoro pemask uye exhale. Kana iwe uchinzwa kuvuza, hapana chisimbiso chakakodzera.
• Kana mweya ukayerera uchitenderedza mhuno, gadzirisazve mhino sezvakatsanangurwa. Kana mhepo ikadonhedza pamipendero yemasiki, gadzirisazve chiuno chenzeve chakatenderedza nzeve kusvikira chisimbiso chaitwa.
· Kana chisimbiso chakakodzera chisingakwanisi kuwanikwa nekuda kwekubuda kwemhepo, kumbira rubatsiro kana kuedza saizi yakasiyana kana modhi.
6. Tsiva mask kana chisimbiso chakakodzera chechiso chisingagoni kuwanikwa.
7. Dzorera mask nokukurumidza kana kufema kukava kwakaoma kana kuti mask inokuvadzwa kana kukanganisa
Iri peji rewebhu, zvinyorwa zvakapihwa kana chero chimwe chirevo chakaitwa pano chingave chiripo zvinoonekwa, chakadhindwa kana nemuromo ne kana panzvimbo yeDrugTestsInBulk.Com haifanirwe kutorwa sewaranti yekutengesa kana kuti chero masks echiso kana magirovhosi atinotengesa kana iwe. wasarudza, unokodzera chimwe chinangwa. DrugTestsInBulk.Com haitore mutoro wekukodzera kana kukwana kwesarudzo yemushandisi wemaskski kana magirovhosi kune imwe application. Nekuda kwehutsanana uye inoraswa hunhu hwemaski kumeso uye magurovhosi, zvese zvinotengeswa ndezvekupedzisira uye hapana kudzoserwa kana kudzoserwa kunowanikwa.
Iyi KN95 kumeso mask inopa dziviriro kubva kuguruva, mukume, pet dander, nezvimwe. Kwete Kugeza. Inouya mupakiti ye10 kana 20. Iyi KN95 yekumeso mask ine manzwiro akanaka kwairi uye yakanaka uye inonamira pachiso. Yakagadzirwa muChina.
Zvakapfuura: KN95 GB2626-2006,GB2626-2019 (Yakaiswa Musoro)
Zvinotevera: KN95 GB2626-2006,GB2626-2019
Mafemufemu Kn95 Supplier
Zvifemero Kn95 Suppliers